‘सुसाईड नोट’ |
प्रकाशित मिति :2020-04-01 16:36:48
करिब करिब रातीको साढे १२ जती बजेको होला । बिमला सबै घरधन्दा सकेर टीभी हेर्न लागिन् । टेलिभिजनमा पनि त्यो मध्यरातमा के नै आउथ्यो होला र तै पनि उनले एकपछि अर्को च्यानल चेन्ज गर्दै रहिन। जुन च्यानल लगाए पनि चित्तै नबुझे पछी दिक्क लागेर रिमोट हुत्याएर कोल्टे फर्किन मात्र के लागेकी थिइन् उनको मोबाईलमा घण्टी बज्यो । फोन श्रीमान् बिमलको थियो । फोन उघाइन । हेलो भन्नेबित्तिकै उताबाट केवल एक वाक्य “म आज आउदिन कामले बिजी छु” मात्र आवाज आयो । अनि फोन कट्यो । उता पट्टी पृस्ठभूमीमा कामुक शैलीमा महिला स्वर “कम अन बेबी” भनेको सुनिन्छ । बिमलाले कल ब्याक गर्दा तुरन्तै उताको मोबाइल ‘स्वीच अफ’ को सङ्केत आयो ।
जसरी फोन स्विच अफ भयो ठिक त्यसै गरी उनको मूड पनि अफ भयो अनि टीभीको पनि । उनी झर्को मान्दै उठ्छिन अनि एक पटक केटाकेटी सुतेको कोठामा जान्छिन र हेर्छिन्, – छोराछोरी राम्रो सङ्ग सुतेका छन् कि छैनन् भनेर । सानी छोरीले सिरक राम्रोसँग नओढेकी हुनाले उनको सिरक मिलाईदिन्छिन् । अनि दुबैजना बच्चालाई निधारमा चुम्मन गरेर ढोका बिस्तारै ढप्क्याएर साझमा पकाएको सबै खानाहरु -खसीको मासु, मसला पुलाउ, नेपाली अचार अनि सलाद- फ्रीजमा राखिन् अनि मनमनै भुन्भुनाइन् । “यदी घिच्न मन थिएन भने पहिल्यै किन नभनेको होला । हुन त यसमा नयाँ खासै के नै कुरा भयो र आज मात्र ।
काम त केवल उसले मात्र नै पो गर्छ नि । घरमा त सबै आफ से आफ नै हुन्छ । हरेक कुराको हद र सिमा हुन्छ नि । कत्ती सहनु । सक्ने जती पो सहन सकिन्छ । हदै नागे पछी त …. यत्ती भन्दै आफ्नो कपालको गुजुल्टोको जरामा बेस्सरी अठ्याउछिन् अनि भुत्भुताउदै जुरुक्क ओच्छ्यानबाट उठ्छिन् र कलम र कागज तयार पारी केही लेख्छिन् । जसको शिर्षक हुन्छ:
मलाई त्यो दिन अहिले पनि याद छ, जुन दिन हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो । त्यो कफी सपको सोफामा बसेर तिमीले लजाउदै हेर्दै थियौ, जतिबेला म अफिसको मिटिङको लागी गएकी थिएँ । मिटिङ सकिएपछी जब म होटलबाट निस्कन लागेको मात्र के थिएँ तिमी म छेउ आएर मेरो नाम सोधेको थियौ । सो बेला ममा सार्है घब्राहट छाएको थियो । हतार-हतार बाहिर निस्केर ट्याक्सीमा चढे । तिमीले त्यो दिन मलाई मेरो अफिससम्म बाइकमा पिछा गरेको थियौ । अनि केही दिन पछी मेरो घर पत्ता लगाएर ‘आशिक’ झै घरसम्म नै पिछा गर्ने गर्थ्यौ । म जता जान्थे, तिमीलाई त्यतै पुगिरहेको देख्थे । कुनै हिन्दी फिल्ममा देखिने जस्तो कहाँनी जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो पल । मेरो नाम पत्ता लगाई मेरो फेसबूक भित्रका धेरै अगाडिका फोटोलाई समेत ‘लाईक अनि लब रियाक्ट’ गरेर महिनौ पिछा गर्दा मेरो मनमा पनि तिम्रो बारेमा कौतुहलता लागेर आयो अनि बिस्तारै मन जित्न थाल्यौ । त्यसपछी मलाई पनि तिम्रो बारेमा अलि अलि जान्न मन लग्न लायो र तिमीले धेरै पटक कफी पिउन गरेको आग्रहलाई एकदिन स्वीकार्दाको दिन तिमी कत्ती धेरै खुशी देखिएको थियौ, त्यो म अहिले झलझल्ती सम्झिरहेको छु ।
तिम्रो प्रेम प्रस्ताब स्वीकार गरेको एक साल पछी बिहे । तीन सालभित्र दुइ सन्तान । तर अहिले केवल म । हो केवल ‘म’ मात्र अहिले । यी दुई सन्तानका साथ केवल म एक्लै । तिमी कामबाट कतिबेला आउँछौ अनि कतिबेला जान्छौ, न त्यो मसँग सल्लाह हुन्छ न त मलाई थाह नै हुन्छ । मैले आफ्नो हुँदाखादाको त्यस्तो राम्रो जागिर तिमीले नै छोडिदेउ भनेकोले छोडे । सबै साथीभाइ अनि आफन्त नातेदारसङ्ग नभेट भन्यौ, मैले तोडिदिए सबै नाता र सम्पर्क । धेरैले बोलाउथे बिबाह, पास्नी, ब्रतबन्ध एनिभर्सरी, जन्मोत्सब्, फेयरवेल अनि जमघटहरुमा । तर घरमा बच्चा एक्लै हुन्छन् भनेर म सबैलाई टारिदिन्थे ।
मलाई थाह नै नदिई तिमी कयौंदिन घरबाट हराउथ्यौ । कहिले साथीभाइसँग घुम्न हप्तौ जान्थ्यौ । जहिल्यै मिटिङ-मिटिङ अनि अफिसियल काम भन्दै दुई चार रात घर मै आउदैनौ थियौ । पकाएको खाना कुरेर बसेको र भोली पल्ट डस्बिनमा फालेको घटना कति छन् कति, त्यो मेरो गणनामा हुनै छोडिसक्यो । साढे ३ महिना भएछ छोरीलाई स्कूल पुर्‍याउन र राशन तरकारी किन्न पसल जानेबाहेक अरु कामका लागी घरको जस्केलो नकटेको । फेसबूकमा साथीभाइहरुले पती-पत्नी घुमफिर गरेको कत्ती धेरै फोटो अनि हासखेल गरेको कस्ता रमाइला रमाइला फोटो देख्दा मन कटक्क खादै लाईक गर्दै बस्नु सिवाय अरु अवसर केही पाइन मैले । यसो सम्झन्छु हाम्रो ब्याजीका साथीभाइ मध्य सबैभन्दा बढी रमाइलो गर्ने मान्छे थिएँ म । सबै साथीहरुले भन्थे कि म नगएको दिन कुनै पनि जमघट नरमाइलो हुन्छ। कत्ती धेरै हास्थ्यौ हामी अनि रमाइलो पनि । बिहे गरेपछी अनायासै हास्न बिर्सेछु मैले । “आ….. स्वास्नी घरमा छदैछे नि” भनेर ढुक्कका साथ यसरी बेखबर हराउथ्यौ कि, घरमाचाहिँ सबै काम आफ से आफ अटोमेटिक सम्पन्न हुन्छ । फोन गर्दा कम से कम अलि राम्रोसँग रेस्पोन्स त गर्न सकिन्थ्यो होला नि, केवल छोटो दुइ शब्द, त्यो पनि सार्है बिस्तारै (ब्यस्त छु) भन्न नसकिदै फोन काट्थ्यौ । मध्य रातमा तिमीसँग परस्त्रीको स्वर सुन्दा मेरो मन र मुटु कस्तो भयो होला रु त्यो कहिल्यै सोच्न सक्यौ तिमीले ?
धेरै पटक यो विषयमा सम्झाउन खोजे । तर तिमी भन्थ्यौ “पैसा दराजमा छ, केही कुराको अभाव हुन पाएको छैन घरमा । बाबुनानीहरु अनि आमालाई कुनै कुराको पनि कमी हुन नदिनु ।” सबै घर ब्यबहारमा मैले सबैलाई आड भरोसा अनि साथ दिएको छु । तर तिमीलाई मेरो प्रश्न छ कि, “मैलेचाहिँ के खोजेको साथ पाएको छु त रु के पैसाले मात्र एक श्रीमतीलाई सबै थोक पुग्छ रु श्रीमान्को समय आफ्ना लागी अनि घरका लागी श्रीमतीले चाहेकी हुन्न होला र ?”
‘नपाउदा कस्तो न कस्तो, पाएपछी सस्तो’ भन्ने उखान झै ब्यबहार गर्‍यौ है मलाई । मैले मौखिक सम्झाउन खोजेको आजसम्म तिमीलाई हजार चोटी भन्दा बढी भयो होला । तर तिमीले मेरो यो गुनासोलाई “कचकचू को संज्ञा दिन्छौ ।
अब त अत्ती भयो बिमल । तसर्थ बरु म यो दुनिया नै छोडेर जाने निर्णयमा पुगे । मलाई माफ गरिदेउ अनि छोराछोरी अनि आमालाई मेरो मेरो अभाव खड्कन नदिनु है । आफ्नो ख्याल गर्नु, जत्ती ब्यस्त भए पनि समयमै खाना खानु अनि सधै खुशी रहनु है ।
अभागिनी बिमला ।
यत्ती लेख्न साथ उनलाई केटाकेटीको याद आउछ अनि दौडेर उनीहरु सुतेको ठाउँमा पुग्छिन् । अनि सिरक राम्रोसँग ओढाएर अकोहोरो सन्तानहरुको अनुहार हेर्छिन् र तप्प आशु झार्दै पुन त्यो सुसाइड नोटनिर पुगी केहीबेर टोलाएर सोचमग्न हुँदै कापीबाट सो नोट स्वाट्ट च्यातेर डल्लो पारी डस्बिनमा मिल्काउदै चित्कारिदै कराउछिन् । “नारीलाई त मर्न पनि छुट छैन यो भवसागरमा । यो सारा बन्धनले, यदि म नै रहिन भने यी लालाबालाहरुको हालत के होलाू भन्दै भक्कानिन्छिन् ।
उनले यी र यस्ता चिट्ठी लेख्दै मिल्काएको दुइ दर्जन पटक जती नाघिसकेको थियो सायद । मध्यरातमा जब मनमा बिरक्त लाग्थ्यो अनि आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुग्थिन् । लालाबाला, घर ब्यबहार अनि श्रीमान् एक्लो हुन्छन् फेरि भनेर त्यो पन्ना च्यातेर फालिदिन्थिन् । प्रत्यक दिन उनले ‘आफ्नो आफैले गर्ने हत्या’ जितेर बसेको पनि आज महिनौ भईसकेको थियो ।
भोली पल्ट सदा झै उनि त्यस दिन सासूआमा अनि छोराछोरीलाई खाना खुवाई बाबुनानीलाई स्कूल पुर्‍याउन गएकी थिइन् । आउँदा घरको मुल ढोका खुल्लै देखिन र हत्तारिदै कोठाभित्र छिर्छिन् । बेडरूममा उनका श्रीमान् टाउको समाएर आँखाभारी भरी टिलपिल टिलपिल आशु बनाएर बसिरहेका थिए । छेउमै विवाह अगाडि उनले किनिदिएको आफूलाई एकदमै मन पर्ने कुर्ता सुरुवालको सेट थियो । उनले त्यो देख्ना साथ “के भयो र , आज चाडै अफिसबाट आएछौ निू भनेर सोधिन् । अनि निधारमा हात राख्दै, सन्चो छैन हो ? भनेर सोधिन् । श्रीमान भक्कानिदै “आजसम्म मैले यस कुरामा कहिल्यै ख्याल गर्न सकेको थिइन । मैले कमाएर ल्याइदेकै छु, घरमा सबै थोक परिपुर्ती गरिदिएकै छु । काममा सधै ब्यस्त हुन्छु त यसमा हाम्रै भलाईको लागी त हो नि” भन्ने सोच्थे । प्लीज मलाई माफ गर बिमला, म ठूलो भ्रममा रहेछु । तिमीलाई विवाहपछी मैले आत्मियता दिएकै रहेनछु भन्ने कुराको अहिले पो मलाई ‘फ्लास ब्याक’ भइरहेको छ । विवाह पछी उनको मुखबाट ननिस्किएको सायद पहिलो मायालु शब्द थियो यो । अनि पहिलो पटक नयाँ वाक्य सुनेकी हुनाले बिमला पनि नरोइ बस्ने कुरै भएन । अनि धेरै बेर दुबैजना रोए ।
केही बेर पश्चात बिमलले फ्रीजबाट दुई गिलास चिसो पानी लिएर आए । अनि बिमलाको आसु रुमालले पुछिदिएर पानी दिदै आफ्नो छातीमा टसाएर दुबै जना धेरै बेर रुन्छन् । अनि बिमलासँग पुन माफी माग्दै आइन्दा यस बारेमा आफू सधै सजग हुने अनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अबबाट घर परिवार हुने अनि मात्र अरु काम भन्दै यो कुर्ता सुरुवालको सेट थमाउदै “हिड आज फिल्म हेर्न जाने । बाबुनानी अनि आमालाई पनि साझ खाना खान बाहिर लिएर जाने है” भने ।
बिमला पनि हर्सित हुँदै कुर्ता सुरुवाल लगाउन ‘चेन्जिङ रूम’ जान लाग्दा यसो डस्बिनमा हेर्छिन् । तर त्यहाँ उनले पहिला पहिला डल्लो पारेर फालिएको त्यो सुसाइड नोट देख्दिनन् ।